စပါယျရှယျဝမျးလို့ နာမညျကွီးခဲ့တဲ့ မျောရငျညိုရဲ့ နညျးပွဘဝမှာ အကွီးဆုံးမှားခဲ့တဲ့ အမှား ၅ ခု – Sports A2Z
သူ့ရဲ့အကောငျးဆုံးအခြိနျမှာ ဘောလုံးခတျေတခတျေကို ပွောစမှတျတှငျစခေဲ့ပွီး အပွောငျမွောကျဆုံးနညျးဗြူဟာရှငျလို့ သတျမှတျခံခဲ့ရပမေယျ့ ခတျေရဲ့ရစေီးကွောငျးအလိုကျ ပွောငျးလဲဖို့တော့ မျောရငျညိုက ခေါငျးမာမာနဲ့ ငွငျးဆနျခဲ့တယျ။ တကြော့ပွနျခယျြလျဆီးခရီးရဲ့ စတမျးဖို့ဒျဘရဈချြနောကျဆုံးရာသီရဲ့ အရှကျတကှဲအကြိုးနညျးဖွဈရပျ၊ ယူနိုကျတကျနဲ့ စပါးဈတို့ကနေ ကနျထုတျခံခဲ့ရမှုတှကေ မျောရငျညိုရဲ့ ခတျေမမီဘဲ ဒိတျအောကျနတေဲ့ ဘတျဈကစားကှကျနဲ့ ခံစဈဗြူဟာကွောငျ့ အဆိုပွုခံထားရပါတယျ။
မျောရငျညိုကိုကွညျ့ရငျတော့ ကှငျးထဲက အရှုံးရလဒျမှနျသမြှကို တာဝနျခံလမေ့ရှိဘဲ ငါကမှနျတယျ၊ ကစားသမားတှကွေောငျ့လို့ မီဒီယာတှရှေမှေ့ာ ပွောငျပွောငျတငျးတငျး လကျညှိုးထိုးပုံခလြရှေိ့တာက သူ့ကို အားလုံးရဲ့ခြဥျဖတျအဆငျ့အထိ ဖွဈစခေဲ့တယျ။
မျောရငျညိုရဲ့အပွဈဖို့ဇာတျလမျးမှာ လုချရှောကလညျး အသုံးတျောခံခဲ့ရဖူးသလို စပါးဈကနေ အထုတျမခံရခငျအပိုငျးအခွားမှာ အသငျးရဲ့ရလဒျဆိုးတှကေ ကစားသမားတှကွေောငျ့ ပုံခခြဲ့လို့ အသငျးသားတှရေဲ့ သစ်စာဖောကျခွငျးကို မကွာခဏ ခံရလရှေိ့တဲ့ ဥပမာအတိုငျး မယျမယျရရအောငျမွငျမှုမယူနိုငျဘဲ ဖြာလိပျခဲ့ရပွနျတယျ။
မျောရငျညိုမှာ မေးခှနျးထုတျစရာရှိတာတှကေ သူ့ရဲ့ စရိုကျတှတေငျမက ကိုယျကငျြ့ဖောကျပွားမှုအနနေဲ့ ကိုယျကြိုးကိုသာမကျမောပွီး ကောကျရိုးမီးထတောကျတဲ့ အောငျမွငျနောကျကိုလိုကျပွီး လူငယျတှကေို မကျြကှယျပွုလရှေိ့တဲ့အခကျြလညျး အပါအဝငျပါ။ လူငယျတှကေို ပှဲမထုတျဘူး။ မှေးထုတျဖို့ စိတျမဝငျစားတဲ့အပွငျ တောကျမယျ့မီးခဲ တရဲရဲဆိုတဲ့ လူငယျတှကေိုပါ သူ့လကျထဲမှာ ခြိုးနှိမျပွီး ခွစှေမျးတှကေို မွမွှေုပျပဈသူအဖွဈလညျး သူ့ရဲ့သမိုငျးမှာ အမညျးစကျထငျးနခေဲ့တယျ။.
မို​ဆာလားနဲ့ ဒီဘရိုငျးနားတို့ကို အပယျခံဘဝရောကျစသေူ
လကျရှိဥရောပရဲ့ဘုရငျအဖွဈ ရပျတညျပွီး လီဗာပူးလျ၊ မနျစီးတီးအသငျးတို့နဲ့အတူ ပရီးမီးယားလိဂျနဲ့ ခနျြပီယံလိဂျကို လှမျးမိုးနတေဲ့ မိုဆာလားနဲ့ ဒီဘရိုငျးနားတို့က မျောရငျညိုကိုငျတှယျခဲ့တဲ့ ခယျြလျဆီးနညျးပွဘဝမှာတော့ နရောမရခဲ့ဖူးတဲ့အပွငျ ကနျထုတျခံရတယျ။ ပရီးမီးယားလိဂျနဲ့ ဝေးရာကို လှငျ့စငျထှကျပွီး အပယျခံဘဝရောကျခဲ့ရတယျ။
ဒီဘရိုငျးနားဟာ အသငျးမှာ စတုတ်ထဦးစားပေးနရောမှာပဲရှိတယျလို့ ပကျပကျစကျစကျပွောထှကျခဲ့ပမေယျ့ ပတ်တမွားမှနျတဲ့ နှံမနဈခဲ့တဲ့ လကျရှိအောငျမွငျမှုမှာ မျောရငျညိုကြေးဇူး မူးလို့ရှုစရာမရှိခဲ့တာကို တှရေ့တယျ။
ဘယျအသငျးရောကျရောကျ အဓိကကစားသမားတှကေို ပွဿနာရှာတတျသူ/ ဂယကျစိနျ
မျောရငျညိုက ဘယျအသငျးရောကျရောကျ အဲဒီအသငျးရဲ့ အဓိကကစားသမားတှနေဲ့ အဆငျမပွဖွေဈတာကို တှရေ့တယျ။ ပတျမှတေယျ၊ ပွဿနာရှာတယျ၊ ခြောငျထိုးတယျ…. ဒါက သူကိုငျတှယျသမြှ အသငျးတိုငျးမှာ ဖုံးကှယျထားလို့ ကိစ်စတှဖွေဈပွီး ထပျတလဲလဲဗှဖေောကျတတျသူဖွဈတယျ။
ကာဆီးလကျဈ၊ ရာမို့ဈ၊ ပေါ့ဘာ၊ ဟာဇကျ၊ ဖာဘရီဂတျဈ၊ လုချရှော၊ မာစီယယျလျတို့က သူလုပျသမြှ သညျးညညျးမခံနိုငျတဲ့အဆုံး အသငျးနဲ့ခှာပွဲရတဲ့ ဇာတျလမျးတှကေ လကျရှိစပါးဈအထိ သူကိုးစားရတဲ့ ဟာရီကိနျးနဲ့ အတှငျးရေးမလှခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ ဖျောပွခံရတာတှအေထိ ဝဲဂယကျစိနျဖွဈခဲ့တယျလို့ ယူဆနိုငျတယျ။
သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်မှာ ဘောလုံးခေတ်တခေတ်ကို ပြောစမှတ်တွင်စေခဲ့ပြီး အပြောင်မြောက်ဆုံးနည်းဗျူဟာရှင်လို့ သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပေမယ့် ခေတ်ရဲ့ရေစီးကြောင်းအလိုက် ပြောင်းလဲဖို့တော့ မော်ရင်ညိုက ခေါင်းမာမာနဲ့ ငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ တကျော့ပြန်ချယ်လ်ဆီးခရီးရဲ့ စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ခ်ျနောက်ဆုံးရာသီရဲ့ အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းဖြစ်ရပ်၊ ယူနိုက်တက်နဲ့ စပါးစ်တို့ကနေ ကန်ထုတ်ခံခဲ့ရမှုတွေက မော်ရင်ညိုရဲ့ ခေတ်မမီဘဲ ဒိတ်အောက်နေတဲ့ ဘတ်စ်ကစားကွက်နဲ့ ခံစစ်ဗျူဟာကြောင့် အဆိုပြုခံထားရပါတယ်။
မော်ရင်ညိုကိုကြည့်ရင်တော့ ကွင်းထဲက အရှုံးရလဒ်မှန်သမျှကို တာဝန်ခံလေ့မရှိဘဲ ငါကမှန်တယ်၊ ကစားသမားတွေကြောင့်လို့ မီဒီယာတွေရှေ့မှာ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း လက်ညှိုးထိုးပုံချလေ့ရှိတာက သူ့ကို အားလုံးရဲ့ချဉ်ဖတ်အဆင့်အထိ ဖြစ်စေခဲ့တယ်။
မော်ရင်ညိုရဲ့အပြစ်ဖို့ဇာတ်လမ်းမှာ လုခ်ရှောကလည်း အသုံးတော်ခံခဲ့ရဖူးသလို စပါးစ်ကနေ အထုတ်မခံရခင်အပိုင်းအခြားမှာ အသင်းရဲ့ရလဒ်ဆိုးတွေက ကစားသမားတွေကြောင့် ပုံချခဲ့လို့ အသင်းသားတွေရဲ့ သစ္စာဖောက်ခြင်းကို မကြာခဏ ခံရလေ့ရှိတဲ့ ဥပမာအတိုင်း မယ်မယ်ရရအောင်မြင်မှုမယူနိုင်ဘဲ ဖျာလိပ်ခဲ့ရပြန်တယ်။
မော်ရင်ညိုမှာ မေးခွန်းထုတ်စရာရှိတာတွေက သူ့ရဲ့ စရိုက်တွေတင်မက ကိုယ်ကျင့်ဖောက်ပြားမှုအနေနဲ့ ကိုယ်ကျိုးကိုသာမက်မောပြီး ကောက်ရိုးမီးထတောက်တဲ့ အောင်မြင်နောက်ကိုလိုက်ပြီး လူငယ်တွေကို မျက်ကွယ်ပြုလေ့ရှိတဲ့အချက်လည်း အပါအဝင်ပါ။ လူငယ်တွေကို ပွဲမထုတ်ဘူး။ မွေးထုတ်ဖို့ စိတ်မဝင်စားတဲ့အပြင် တောက်မယ့်မီးခဲ တရဲရဲဆိုတဲ့ လူငယ်တွေကိုပါ သူ့လက်ထဲမှာ ချိုးနှိမ်ပြီး ခြေစွမ်းတွေကို မြေမြှုပ်ပစ်သူအဖြစ်လည်း သူ့ရဲ့သမိုင်းမှာ အမည်းစက်ထင်းနေခဲ့တယ်။.
မို​ဆာလားနဲ့ ဒီဘရိုင်းနားတို့ကို အပယ်ခံဘဝရောက်စေသူ
လက်ရှိဥရောပရဲ့ဘုရင်အဖြစ် ရပ်တည်ပြီး လီဗာပူးလ်၊ မန်စီးတီးအသင်းတို့နဲ့အတူ ပရီးမီးယားလိဂ်နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ကို လွှမ်းမိုးနေတဲ့ မိုဆာလားနဲ့ ဒီဘရိုင်းနားတို့က မော်ရင်ညိုကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ ချယ်လ်ဆီးနည်းပြဘဝမှာတော့ နေရာမရခဲ့ဖူးတဲ့အပြင် ကန်ထုတ်ခံရတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်နဲ့ ဝေးရာကို လွင့်စင်ထွက်ပြီး အပယ်ခံဘဝရောက်ခဲ့ရတယ်။
ဒီဘရိုင်းနားဟာ အသင်းမှာ စတုတ္ထဦးစားပေးနေရာမှာပဲရှိတယ်လို့ ပက်ပက်စက်စက်ပြောထွက်ခဲ့ပေမယ့် ပတ္တမြားမှန်တဲ့ နွံမနစ်ခဲ့တဲ့ လက်ရှိအောင်မြင်မှုမှာ မော်ရင်ညိုကျေးဇူး မူးလို့ရှုစရာမရှိခဲ့တာကို တွေ့ရတယ်။
ဘယ်အသင်းရောက်ရောက် အဓိကကစားသမားတွေကို ပြဿနာရှာတတ်သူ/ ဂယက်စိန်
မော်ရင်ညိုက ဘယ်အသင်းရောက်ရောက် အဲဒီအသင်းရဲ့ အဓိကကစားသမားတွေနဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်တာကို တွေ့ရတယ်။ ပတ်မွှေတယ်၊ ပြဿနာရှာတယ်၊ ချောင်ထိုးတယ်…. ဒါက သူကိုင်တွယ်သမျှ အသင်းတိုင်းမှာ ဖုံးကွယ်ထားလို့ ကိစ္စတွေဖြစ်ပြီး ထပ်တလဲလဲဗွေဖောက်တတ်သူဖြစ်တယ်။
ကာဆီးလက်စ်၊ ရာမို့စ်၊ ပေါ့ဘာ၊ ဟာဇက်၊ ဖာဘရီဂတ်စ်၊ လုခ်ရှော၊ မာစီယယ်လ်တို့က သူလုပ်သမျှ သည်းညည်းမခံနိုင်တဲ့အဆုံး အသင်းနဲ့ခွာပြဲရတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေက လက်ရှိစပါးစ်အထိ သူကိုးစားရတဲ့ ဟာရီကိန်းနဲ့ အတွင်းရေးမလှခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ ဖော်ပြခံရတာတွေအထိ ဝဲဂယက်စိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ယူဆနိုင်တယ်။